China ZZ Disposable Sugarcane Bagasse Plates - Dịka okike Organic, Eco-friendly Biodegradable & Compostable - Akwụkwọ & Ihe ọzọ rọba - Ọrụ dị egwu - 9 ″ Ndị na-emepụta Plateau na ndị na-eweta ya | ZHONGSHENG
Clamshell na-efe efe
ZZ Eco Ngwaahịa Biodegradable Sugarcane Bagasse Soup…
ZZ Eco Ngwa 1500ml Rectangle Biodegradable Bagas…
ZZ Eco Ngwaahịa 750ml Rectangle Biodegradable Bagass ...
ZZ Biodegradable 8X8 Wepụ Hinged Clamshell 200 P ...
ZZ Eco Ngwaahịa 16 OZ Square Ebere Sugar / Bagas…
Diski ewepu Sugarcane Bagasse Plates - Dịka okike Organic, Eco-Friend-Biodegradable & Compostable - Akwụkwọ & Ihe ọzọ rọba - Ọrụ dị egwu - 9 ″ Plate
Ihe adighi: YP090
Size: 225 * 19.6mm
Agba: Agbala agbawayo / enweghị akwụkwọ
Ogo katoonu: 46 * 16 * 46cm
Mbukota: 4 * 125pcs
Ojiji: Hotel, Restauranlọ oriri na ọ Restauranụ ,ụ, Home
Mkpoko Sugarcane Bagasse ndị a nwere ike ịdọrọ bụ ezigbo nhọrọ maka onye ọ bụla nke na-ezube ịtụ oriri. Jiri ha maka emume ncheta ọmụmụ gị na-esote, fete ma ọ bụ ọtụtụ ememme ndị ọzọ pụrụ iche. Ebumnuche gburugburu ebe obibi na nke nwere ike ịtọpu ya, epekele 9 de ndị a biodegradable n'ime ọnwa atọ ruo ọnwa isii. Ha na - eguzogide okpomọkụ ruo 212 degrees Fahrenheit. Ihe ngwugwu a nwere efere 500. Zụta otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwugwu, dabere na nha nke otu gị. Diskable Sugarcane Bagasse efere, ndammana Organic, Eco-friendly, Biodegradable na Compostable Paịlet na Alternative plastic, Ọrụ dị arọ, 9 ″
Enwere ike ịhapụ diski okpete Bagasse
Nchekwa maka gburugburu ebe obibi na enwere ike iwepu ya
Ogo siri ike
Nwere ike imebi kpam kpam n’ime ọnwa 3 ruo isii
Na-egbochi okpomọkụ ruo ogo 212 Fahrenheit
9 pla efere dị arọ
Diski Sugarcane Bagasse Disposable - Ekere Organic, Enco-friendly Biodegradable & Compostable - Akwụkwọ & Ngwakọta rọba - Ọrụ dị egwu - 9 ″ Plate bụ nhọrọ dị ebube maka onye ọ bụla na-ezube ịtụ oriri. Jiri ha maka emume ncheta ọmụmụ gị na-esote, fete ma ọ bụ ọtụtụ ememme ndị ọzọ pụrụ iche. Ebumnuche gburugburu ebe obibi na nke nwere ike ịtọpu ya, epekele 9 de ndị a biodegradable n'ime ọnwa atọ ruo ọnwa isii. Ha na - eguzogide okpomọkụ ruo 212 degrees Fahrenheit. Ihe ngwugwu a nwere efere 500. Zụta otu ma ọ bụ ọtụtụ ngwugwu, dabere na nha nke otu gị.
Diski Sugarcane Bagasse Disposable, Eke Okike, Eco-Enyi, Biodegradable na Compostable Paịlet na Nke ozo, Ọrụ dị egwu, 9 ″ nwere njiri mara mma ndị a.
▶ Iji eriri ahịhịa dị ka akụrụngwa, ọ nwere ike merụọ onwe ya n'ime okike, adịghị emerụ ahụ mmadụ ahụ n'oge mmepụta na ojiji, ọ nwere ike ichebe gburugburu ebe obibi.
▶Ike nke ngwaahịa dị mma, nwere nnukwu nrụgide nrụgide, mgbochi mmiri, isọbọ na ihe ndị ọzọ dị elu karịa ngwaahịa EPS. N'otu oge ahụ, ogo ngwaahịa dị ọkụ, ọ nwere ike ịbụ ihe mgbapụta na mkpuchi mmiri. Ọ nwere ezi okpomọkụ na-eguzogide ma na-emezu ihe nke otu apụ disableable tableware.
▶Mara mma ma mara mma, nke nwere ngosipụta mara mma, ọtụtụ ụdị na iche. Ngwaahịa ndị a na-ejikarị: igbe nri ngwa ngwa, efere, ụta nri ngwa ngwa na tebụl ndị ọzọ, yana ịkwakọ ngwaahịa eletrik dị iche iche.
▶Ntughari ihe bara uru. Ihe mkpofu ahihia eji akpo osisi nwere ike 100% gha emeghari ma tugharia ya n’enweghi nnukwu ume na itinye uchu gburugburu. Ọ na - eme ka nchekwa gburugburu ebe obibi na - echekwa akụ.
▶Ezigbo emebi mmụọ. A na-atụfu ihe ndị na-emepụta ihe na-emebi ihe n’ahụ́ osisi ma nwee ike mebie ya kpamkpam, na-agbanwe ala fatịlaịza na ahịhịa, na-azụlite ala na-eme nri, nke bara uru na nguzozi ihe ọkụkụ. Ọ nwere ike dozie nsogbu mmetọ a na-eweta site na igbe nri ngwa ngwa EPS foam. Akụrụngwa na-adabere na eriri ahịhịa, a napụrụ ya site na okike, ihe okike na gburugburu ebe obibi, enwere ike iji ya mee ihe na -20 ~ 200 Celsius, enwere ike iji ya mee ihe maka ikpo ọkụ na friji friji, akụrụngwa Osisi anaghị ahapụ ihe na-egbu egbu na ihe egwu. n'oge eji ngwaahịa. Mgbe ejiri ngwaahịa ahụ kọchaa, ala ahịhịa ma ọ bụ ahịhịa ga-emebi ya kpamkpam, laghachi na okike. Ha bụ ọtụtụ uru
Nke gara aga: Ede-enyi na enyi Biodegradable & Compostable - Akwụkwọ & Onye ọzọ - rọba - Ọrụ dị egwu - 9 ″ 2-Compartments Plate
Osote: Na -emere akụkụ nri na desserts na a ZZ biodegradable okpete / bagasse 7. Efere.
ZZ Eco Ngwaahịa Biodegradable White Sugarcane / B ...
Z Eco Ngwaahịa Biodegradable White Sugarcane / Ba ...
Ngwa ahia ZZ Eco Pulp Round White Sugarcane / Baga…
Blog kachasị ọhụrụ
Itinye nri ehihie Clamshell kwesịrị ịdị Mor ...
Ọ bụ ezie na iji ikike mgbochi rọba emeela afọ iri, na ọtụtụ mba na ndị mmadụ chọrọ ịme ka gburugburu ikuku ghara imetọ ya, mana anyị ka nwere ike ịchọpụta na enwere ngwaahịa plastik ndị a na-ewefu. A katọrọ ihe na-adịghị mma nke ihe ndị dị na tebụl plastik diski diski, ha na-enwe nsogbu ...